သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် တွေ ပြန် လည် အ သက် သွင်း ဖို့ ကြိုး စား နေ တဲ့ မျိုး သုဉ်း သွား‌ သော တိ ရ စ္ဆာန် များ - Real Gaming
လက် ရှိ က မ္ဘာ မြေ ပေါ် တွင် မျိုး သုဉ်း သွား သော မျိုး စိတ် များ စွာ ရှိ သည် မှာ ကျွန်ုပ် တို့ သိ ရှိ ပြီး ဖြစ် မှာ ပါ ၊ ထို အ ရာ တွေ က အံ့ ဩ စ ရာ တော့ မ‌ ဟုတ် လောက် တော့ ပါ ဘူး ၊ ကံ ကောင်း တာ က ကျွန် တော် တို့ က မ္ဘာ ပေါ် က သိ ပ္ပံ ပ ညာ ရှင် များ ဟာ မျိုး သုဉ်း ပျောက် ကွယ် သွား ပြီ ဖြစ် တဲ့ ထို တိ ရ စ္ဆာန် ကြီး များ ကို ပြန် လည် ခေါ် ဆောင် ကာ ရှင် သန် စေ ဖို့ ကို ကြိုး စား နေ ကြ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
( ၁ ) အ မွှေး ရှည် ဆင် ကြီး
အ ရွယ် အ စား – အ ထီး များ ရဲ့ ပ ခုံး က အ မြင့် ၈ . ၉ ပေ နှင့် ၁ ၁ . ၂ ပေ ကြား မြင့် ပြီး အ လေး ချိန် က ၆ တန် ခန့် ရှိ ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – အာ ရှ အ ရှေ့ ပိုင်း ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – လွန် ခဲ့ သော နှစ် ၄ ၀ ၀ ၀ ခန့် ။
ဆက် နွယ် သော မျိူး စိတ် – အာ ဖ ရိ က ဆင် ။
( ၂ ) တော ရိုင်း မြင်း ကျား
အ ရွှယ် အ စား – အ မြင့် က ၄ . ၅ ပေ ခန့် မြင့် ကြ ပြီး ၈ . ၅ ပေ ရှည် လျား ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – အာ ဖ ရိ က တောင် ပိုင်း ။
မျိူး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – ဆယ့် ကိုး ရာ စု နှောင်း ပိုင်း ။
ဆက် နွယ် သော မျိူး စိတ် – မြင်း ကျား ။
( ၃ ) ဆင် အ ရွယ် အ စား လောက် ရှိ တဲ့ ငှက် ကြီး
အ ရွယ် အ စား – အ လေး ချိန် ပေါင် ၁ ၆ ၀ ၀ ခန့် ရှိ ပြီး အ မြင့် ပေ ၉ . ၈ ပေ ခန့် မြင့် ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – မက် ဒါ ဂတ် စ ကာ
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – အေ ဒီ ၁ ၀ ၀ ၀ မှ ၁ ၂ ၀ ၀ ကြား ခန့် ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – ကီ ဝီ ငှက် ။
( ၄ ) ဘိုင် ဂျီ ( တ ရုတ် နိုင် ငံ မြစ် များ တွင် ကျက် စား တဲ့ လင်း ပိုင် )
အ ရွယ် အ စား – အ ထီး များ ဟာ အ လျား ၇ . ၅ ပေ ရှည် ပြီး အ မ ကောင် များ ဟာ ၈ . ၂‌ ပေ ရှည် လျား ကြီး ထွား ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – တ ရုတ် နိုင် ငံ ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ –2002 ခု နှစ် ။ ( သိပ် မ ကြာ သေး )
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – တ ရုတ် လင်း ပိုင် ဖြူ ။
( ၅ ) ‌သင်း ခွေ ချပ် အ ကြီး စား G l y p t odo n t
အ ရွယ် အ စား – ၁ ၂ ပေ ရှည် လျား ပြီး ၁ . ၅ ပေ အ ထက် မြင့် ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – အ မေ ရိ က တောင် နှင့် မြောက် ပိုင်း ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း ၇ ၀ ၀ ၀ နှင့် ၈ ၀ ၀ ၀ အ ကြား ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – သင်း ခွေ ချပ် ။
( ၆ ) P y renea n တောင် ဆိတ် ကြီး
အ ရွယ် အ စား – ခန္ဓာ ကိုယ် က ၅ ပေ ထိ ရှည် လျား ပြီး ပု ခုံး ထိ အ မြင့် မှာ ၃ ၀ လက် မ ရှိ ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – ဥ ရော ပ အ နောက် တောင် ပိုင်း ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – နောက် ဆုံး အ သက် ရှင် နေ ထိုင် တဲ့ P u renea n တောင် ဆိတ် က ၂ ၀ ၀ ၃ ခု နှစ် တွင် မွေး ဖွား ခဲ့ ပြီး အ ဆုတ် ချွတ် ယွင်း မှု ကြောင့် မွေး ပြီး ၇ မိ နစ် အ ကြာ တွင် သေ ဆုံး သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – ‌တောင် ဆိတ် ရိုင်း ။
( ၇ ) ဒို ဒို ငှက်
အ ရွယ် အ စား – အ မြင့် ၃ . ၃ ပေ ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – မော် ရစ် ရှပ် နိုင် ငံ ( Mau r i t i u s ) ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – ၁ ၇ ရာ စု အ တွင်း ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – နီ ဂို ဘာ ခို ။
( ၈ ) တက်‌ မေ နီး ရန်း ကျား
အ ရွယ် အ စား – ၃ ၉ လက် မ နှင့် ၅ ၁ ကြား ရှည် လျား ပြီး ၂ ၄ လက် မ မြင့် ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – န ယူး ဂီ နီ ယာ နှင့် ဩ စ တြေး လျ ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – ၂ ၀ ရာ စု နှစ် ပိုင်း တွင်း ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – တက် မန်း နီး ရန်း တော ရိုင်း ကျား နှင့် n u mba t ။
( ၉ ) ကုန်း ပိုင်း တော ရိုင်း အ ကြီး စား ဝက် ဝံ
အ ရွယ် အ စား – ပေ ၂ ၀ ရှည် လျား ပြီး အ လေး ချိန် ပေါင် ၆ ၆ ၀ ၀ ခန့် လေး ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – အ မေ ရိ က တောင် ပိုင်း ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – လွန် ခဲ့ သော နှစ် ပေါင်း ၁ ၁ ၀ ၀ ၀ ၀န်း ကျင် အ တွင်း ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – ၀က် ဝံ ။
( ၁ ၀ ) အ စွယ် ရှည် ပါ သော ကျား
အ ရွယ် အ စား – အ ကြီး ဆုံး မျိုး စိတ် တွေ က ပေါင် ၄ ၈ ၅ မှ ၉ ၆ ၁ အ ကြား အ လေး ချိန် ရှိ ကြ ပြီး ၃ ၉ လက် မ မြင့် ကြ ပါ တယ် ။
နေ ထိုင် ခဲ့ သော နေ ရာ – အ မေ ရိ က တောင် ပိုင်း နှင့် မြောက် ပိုင်း ။
မျိုး သုဉ်း ခဲ့ သော ကာ လ – လွန် ခဲ့ သော နှစ် တစ် သောင်း ခန့် ။
ဆက် နွယ် သော မျိုး စိတ် – ကျား ။